Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo markale la wareegay gacan ku haynta deegaanka Goof-gaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo markale la wareegay gacan ku haynta deegaanka Goof-gaduud
Wararka saakay naga soo gaaraya gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay maanta markale si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Goof-gaduud oo 30-km u jirta magaalada Baydhabo.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa deegaanka Goof-gaduud ayaa saakay aroortii markale dib uga baxay deegaankaasi, iyagoona dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Ka bixitaan ciidankaasi ee deegaanka Goof-gaduud ay markasta uga baxayaan ayaa la sheegayaa inay sabab u tahay kadib markii la sheegay in wax mushaar ah aan la siinin bilooyinkii ugu dambeysay.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo markii hore ku sugnaa duuleedka deegaanka Goof-gaduud ayaa islamarkiiba la wareegay halkaas, kuwaas oo haatan dhufeysyo waaweyn ka sameeystay wadooyinka laga soo galo deegaankaas.
Si kastaba oo ay ahaataba, dhawaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay dib ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay, kadib markii ay halkaasi isaga baxeen dagaalyahanadda Al-shabaab.